China Organic Planting Pot Biodegradable Seedling Kit Indoor Outdoor Plants မျိုးစေ့ Sstarter Cup ပျိုးခွက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |RongXing
1. ပျိုးပင်များ စက္ကူပျော့ဖတ် ပျိုးအိုး ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သော ပျိုးခွက် ပျော့ဖတ်ပျိုးထောင်အိုး
ဥယျာဉ်ပျိုးပင်များအတွက် 2.4လက်မ သစ်ဆွေးအိုးများ 100% Eco-Friendly Organic Germination Seedling Trays သည် အပင်အမှတ်အသားများဖြင့် ဇီဝရုပ်ကွဲအောင်ပြုလုပ်နိုင်သော
3. စိတ်ကြိုက် တစ်ခါသုံး ဇီဝဆွေးမြေ့နိုင်သော စက္ကူပျော့ဖတ် ပျိုးခွက် ပျိုးပင်ပျိုးအိုးများ
4.Biodegradable Plant အစေ့များ ကြီးထွားရန် Tray Flower Germination တစ်ခါသုံး ပျိုးခင်းအိုးများ
5. ကြီးမားသော Peat Pots မျိုးစေ့စတင်စိုက်ပျိုးနိုင်သော အိုးများ
7. အစေ့ထုတ် စက္ကူအိုးအဝိုင်းများ ပျိုးခင်း ပျိုးအိုးများ ပန်းစိုက်ခြင်းနှင့် စတင်ခြင်း။
8.30PC Biodegradable Fiber Seedling Pots 20 White Plastic Operation Stickers Eco Friendly Plant Peat Pot Planter Plant စိုက်ပျိုးခြင်း
1).အဆင့်မြင့်နည်းပညာ- ထုတ်ကုန်ကို မတူညီသော မျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ဈေးနှုန်းပစ်မှတ်များရရှိရန် မတူညီသောနည်းပညာများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
2) ဒီဇိုင်းပုံသဏ္ဍာန်: ပုံစံများစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
3).ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်- ရေ-ခံနိုင်ရည်, ဆီခံနိုင်ရည်နှင့် anti-static လုပ်နိုင်ပါတယ်။၎င်းတို့သည် ရှော့ခ်ဆန့်ကျင်ပြီး အကာအကွယ်ပေးသည်။
4) အားသာချက်များ- ပုံသွင်းပျော့ဖတ်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းများသည်အလွန်တည်ငြိမ်သည်။EPS ထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။နိမ့်သောတပ်ဆင်ခကုန်ကျစရိတ်;ထုတ်ကုန်အများစုသည် အစုလိုက်အပုံလိုက်ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် သိုလှောင်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
5) လျှောက်လွှာဧရိယာများ- အီလက်ထရွန်းနစ်၊ အလှကုန်၊ အစားအသောက်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းလိုင်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
6) စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ ဒီဇိုင်းများကို အခြေခံ၍ အခမဲ့ ဒီဇိုင်းများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်
1.Q: စျေးနှုန်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ရနိုင်မလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စုံစမ်းမေးမြန်းမှုရရှိပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်း ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုးကားပါသည်။စျေးနှုန်းရရန် အလွန်အရေးတကြီးဖြစ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ သို့မဟုတ် သင့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို သင့် e-mall တွင် ပြောပြပါ။
သင်၏ထုတ်လုပ်မှုအရွယ်အစားအသေးစိတ်၊ အနံ၊ အထူ၊ အရောင်တို့တွင်ကိုးကားနိုင်သည်။ပုံနှိပ်နည်း အရေအတွက် စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
4.Q: သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုဂို သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအမည်ကို ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသလား။
ယခင်- စက်ရုံမှထောက်ပံ့သော ပျော့ဖတ်ပုံသွင်းထုပ်ပိုးမှု Biodegradable Pulp Molded ပန်းဗူးခွံများ
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့် အော်ဂဲနစ် ဆွေးမြေ့နိုင်သော ပျော့ဖတ်ပျိုးခင်း ဗန်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး ပျက်စီးနိုင်သော ပျော့ဖတ် အရည်အသွေး...